शेयरबजारमा चलखेलकाे हल्ला , के भन्छन् अधिकारीहरू ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyशेयरबजारमा चलखेलकाे हल्ला , के भन्छन् अधिकारीहरू ?
सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) परिसूचक ७२ अंकले बढेर दुई हजारमाथि पुग्यो । यो बृद्धिले आइतबार नेप्सेमा गएको १२३ अंकको पहिरोबाट आत्तिएकाहरूलाई केही राहत दियो ।
पछिल्लो तीन महिनामा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५ सयभन्दा धेरै अंकले उकालो लागेको छ ।
Previous articleमन्त्रालयहरूकाे प्रगति विवरणःकसकाे कति प्रगति ? (विवरणसहित)
Next article‘इ–क्लास नेपाल’ एप सार्वजनिक ,विद्यार्थीका लागि थप सहज